Umaki: milo | Martech Zone
Izizathu Zokuthi Abantu Bashiye Izinqola Zokuthenga
NgoMsombuluko, Agasti 6, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Awusoze wathola ukuthengiswa okungu-100% ngemuva kokuthi othile engeze umkhiqizo enqoleni yakho yokuthenga, kepha akungabazeki ukuthi yigebe lapho imali idlula khona. Kunamasu okudonsela abantu emuva ku… ukumaketha kabusha ngenye yazo. Imikhankaso yokumaketha kabusha ilandela abantu ngemuva kokuthi belahle inqola yokuthenga kanye nezikhangiso zezimakethe kubo njengoba bevakashela ezinye izingosi. Imbuyiselo imnandi emikhankasweni yokumaketha kabusha. Kodwa-ke, kungemuva kokuba sebenzile
Umthelela wezibuyekezo eziku-inthanethi
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 27, i-2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Sisanda kuqala ukusebenza nohlu luka-Angie futhi sekuvele kusivulile amehlo ukuthi mangaki amabhizinisi athola ukuholwa ngezilinganiso, ukubuyekezwa kanye namadili abo. Kumabhizinisi endawo ahlinzeka amakhasimende awo ngensizakalo enhle, izibuyekezo ezikhokhelwe ku-Angie's List ziyimali engenacala. Ngokwe-Small Business Search Marketing Survey eyenziwe yi-American Express OPEN, amabhizinisi amancane ase-US asengathembela ekukhulumeni ngomlomo njengendlela ephezulu yokuthi abathengi babathole.
Izeluleko Zokuthenga Zasendaweni Zesikhathi Seholide
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 9, i-2011 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 9, i-2011 Douglas Karr
Sithumele nge-Milo, ukutholwa kwe-eBay. Inhloso kaMilo ukuthi kube nakho konke umkhiqizo kuwo wonke amashalofu kuzo zonke izindaba ezitholakala kuwebhu. Futhi sebevele bacindezela izindawo zokuthengisa kule sizini samaholide! Kukhona amathiphu amahle lapha namathuba ezitolo ezidayisa ukwengeza ukuthengiswa kwazo kwasesitolo ngokushayela ithrafikhi esitolo sazo kusuka ku-inthanethi. Kuzwakala sengathi sekuyisikhathi sokufudumeza ama-Jingle Bells namakhukhi we-Gingerbread, bese uqala ukushayela
Shicilela Indawo Yakho Yokuthengisa Ku-inthanethi neMilo
NgoLwesithathu, Novemba 16, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngesonto eledlule ngikhulume noRob Eroh, ophethe amaqembu omkhiqizo nezobunjiniyela eMilo. IMilo yinjini yokusesha yendawo ehlanganiswe ngqo nePoint of Sale (POS) yomthengisi noma i-Enterprise Resource Planning (ERP). Lokhu kuvumela iMilo ukuthi ibe yinjini yokusesha enembile kunazo zonke uma kukhulunywa ngokukhomba izinto ezisohlwini esifundeni sakho. Inhloso kaMilo ukuba nayo yonke imikhiqizo kuwo wonke amashalofu kuzo zonke izindaba kuwebhu…
Ngishiya Umsebenzi Omkhulu Ngiqonde Kwenhlalo Yezindaba
NgoMgqibelo, Okthoba 4, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Unyaka wokugcina engiwuchithe nePatronpath kube wuhambo olumangalisayo lwama-roller coaster. Le nkampani ikhula ngesivinini esikhulu futhi iphumelele kakhulu! Siwine umklomelo weTechpoint Mira. Siphothule ukuthuthukiswa kokuhlanganiswa kwe-POS okungu-4 - iMicros, iPOSitouch, iComtrex ne-Aloha. Sithuthukise isikhombimsebenzisi somsebenzisi ukukhulisa ukuguqulwa kwamakhasimende ethu. Singeze izici zokuphelelwa umsebenzi nezokuphepha kuhlelo lokusebenza. Saze saphonsa indawo yethu yeRestaurant yendawo yethu
Ngo-Agasti odlule ngabhala ngomsebenzi wami omusha ePatronpath. Lokhu kube yizinyanga eziyi-8 eziyinselele ePatronpath kepha ibhizinisi lizibonakalisa kaningi. Ikota yethu yokuqala ibinkulu kunangonyaka odlule futhi amaklayenti ethu anokukhula kwamadijithi amabili ngaphakathi asebenzisa izixazululo zethu zokumaketha nezokuhweba ngekhompuyutha. Izolo kusihlwa, siwine ama-Mira Awards we-Indiana's Information Technology Gazelle Company! Ingxenye eyinselele kakhulu yemizamo yethu, ukude, ukuhlanganiswa neRestaurant
Izinkampani Ezintathu Eziphakanyiselwe Imiklomelo yeTechPoint Mira!
ULwesithathu, April 16, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Izinkampani ezintathu engiqondane nazo zikhethwe njengabaqedile ukuthola ama-Mira Awards ase-Indiana: i-ExactTarget - ngokungangabazeki ngokukhula nangobuholi obumnandi ukuthi le nkampani izokwazi ukuthola lo mklomelo. Kunezicucu zohlelo lwe-ExactTarget olumane luphambane nemithetho ye-physics yokuthi bangakhiqiza futhi bathumele ama-imeyili ngokushesha kangakanani. Ngiyithandile iminyaka emi-2 nengxenye engiyisebenzele i-ExactTarget! NgoMsombuluko, mina
Ngizoba khona engqungqutheleni yeTechPoint ngoLwesihlanu
NgoMsombuluko, Novemba 5, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Namuhla ekuseni, uMark Gallo (umongameli kaPatronpath) wabelane ngendaba enhle kwiThe Indianapolis Star mayelana nomlando nezinhloso zeTechpoint, iqembu lesifunda lobuchwepheshe besifunda lapha e-Indianapolis. Okuxakayo ukuthi, ngamenywa ngabantu abanomusa eBitwise Solutions ukuba ngibe yisivakashi sabo engqungqutheleni yeTechPoint ngoLwesihlanu. Ngibonga uRon noKim ngesimemo! UMark wanginikeza usuku lokuya emhlanganweni futhi ngilwazisa kakhulu. Lokhu 'kuncane
Monday, November 5, 2007 Sunday, October 4, 2015